एउटा भावुक दृश्य : मालिक पुलबाट हाम्फाले तर कुकुर पुल छेउ मै कुरिरह्यो – live 60media
एउटा भावुक दृश्य : मालिक पुलबाट हाम्फाले तर कुकुर पुल छेउ मै कुरिरह्यो
June 9, 2020 admin	0 Comments
चीनको वुहानमा एक बफादार कुकुर आफ्नो मालिकलाई कुरेर बसिरहेको भावुक तस्वीर भाइरल बनेका छन् । याङ्जे नदीको पुलबाट मालिक हा’म्फा*लेपछि कुकुर त्यहाँ बसेर कुरिरहेको अवस्थामा मर्मत गर्ने व्यक्तिहरूले भेटेका थिए ।
सु नामक स्थानीयले कुकुरलाई सहयोग गर्न खोजेका थिए तर उसले खानेकुरा र पानी पनि लिन मानेन र बोलाउँदा पनि टसमस भएन, वुहान स्मल एनिमल प्रोटेक्सन एसोसिएसनले (सापा) जनाएको छ ।
तस्वीरहरूमा कुकुरले आशा गरेर याङ्जे नदीतिर हेरिरहेको देखिन्छ । मे ३० मा एकजना व्यक्ति पुलबाट हा’म्फा*लेको देखेको भनी एक सर्वसाधारणले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए । सुले कुकुरलाई लिएर पुलबाट अन्तै जान खोजेका थिए तर त्यो दौडियो र बेप-त्ता भयो ।
‘कुकुरले मालिक पुलबाट हा’म्फा-लेको देखेको हुनुपर्छ । घट’ना भएको दिन ऊ मालिकसँगै थियो । मालिकले हा-म्फालेको धेरै दिनसम्म ऊ पुलमै थियो तर पछि ह’रायो,’ सापाका निर्देशक दु फानले भने- ‘हामीले स्थानीय पुरुषसँग सम्पर्क गरेर घट-ना भएको दिनको भिडियो हेरेका छौं । अँध्यारो भएकाले स्पष्टसँग सबै कुरा त देखिएन तर उक्त व्यक्ति हा-म्फा’ल्नका लागि दृढ देखिएको थिया ।
कुकुर धेरै दिनसम्म पुलमै कुरिरह्यो तर पछि भा’ग्यो । कसैले भेटेमा हामीलाई खबर गर्नुहोला । त्यति राम्रो कुकुर भुस्याहा बन्नु हुँदैन ।’
प्रकाशित मिति : June 9, 2020
← नेपालकी यि नायीकालाई कोरोना पुष्टि, अस्पताल भर्ना
देशको सिमानाले छेकेन प्रेमलाईः फिलिपिन्सकी चेली, थारुकी बुहारी →
सामाजिक सञ्जाल मा निक्कै भाइरल हाथ मा पैसा मुट्ठी पारेर सडक पेटी मा सुत्ने भोखा गरीब लाई सहयोग दिने बहिनी #Givina
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, कार्तिक ५ गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
सर्प, नागसँग नागमणि हुन्छ ? के हो वास्तविकता ?
हे भगवान यो कस्तो पिडा ? एकै परिवारका ६ जनाको दा’हसंस्कार
कुन बार जन्मने मानिस कती धनी हुन्छन ? जान्नुहोस